कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १३ गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १३ गते)
काठमाडौँ ०७७ जेठ १३ गते
नेपालमा जेठ १३ गते थप ९० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७ सय ७२ पुगेको छ । सङ्क्रमितहरूमध्ये ६ सय ८८ जना पुरुष र ८४ जना महिला रहेका छन् । सबैभन्दा बढी २१ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेर समूहका २ सय ७१ जनामा कोरोना देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूमध्ये चार जनाको मृत्यु भएको छ भने १ सय ५५ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । जसमा १ सय २४ जना पुरुष र ३१ जना महिला रहेका छन् । हालसम्म कोरोनाको सङ्क्रमण ४६ जिल्लामा फैलिएको छ ।
प्रदेश १ मा जेठ १३ गतेसम्म पीसीआर र आरडीटी विधिबाट १६ हजार ८ सय १८ जनाको परीक्षण गरिएको छ । प्रदेशमा नमुना सङ्कलन गरिएका मध्ये ८७ जनामा कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
झापाको भद्रपुरस्थित मेची अञ्चल अस्पतालको निर्माणाधीन भवनलाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने निर्णयप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित नगरवासीले विरोध गरेका छन् । भद्रपुरका स्थानीयले मेची अस्पताल नजिकै प्रयोगशाला र कोरोना उपचार अस्पताल बनाउँदा जोखिम बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै विरोध गरेका हुन् । नगरमा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पतालमा नजिकै कोरोना उपचार अस्पताल बनाउँदा अन्य सेवा लिनबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुने र स्थानीयमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै नगरवासीले विरोध गरेका हुन् ।
प्रदेश २ मा जेठ १३ गते सप्तरी जिल्लामा ११, सिरहा जिल्लामा पाँच, धनुषा जिल्लामा एक, महोत्तरी जिल्लामा दुई, रौतहट जिल्लामा २२ र बारा जिल्लामा पाँच जना गरी ४६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेशमा जेठ १३ गतेसम्म कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद ९ हजार ८ सय ४६ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा ७ हजार १ सय ७८ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने २ सय ६८ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।
सप्तरीको कञ्चनरूप नपा–११ ठेलिया गोरपारकी २४ वर्षीया गर्भवती महिलाको जेठ १३ गते बिहान साढे ६ बजे मृत्यु भयो । अत्यधिक ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि राजविराज ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा मृत्यु भएको परिवारका सदस्यले बताए । उनलाई १० दिनदेखि ज्वरो आइरहेको थियो ।
बागमती प्रदेशमा जेठ १३ गतेसम्म २४ हजार २ सय १६ आरडीटी परीक्षण भइसकेको छ । पीसीआर परीक्षण ८ हजार ५ सय ५२ जनामा भएको छ । जसमध्ये कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३८ जना भएकोमा २६ जना उपचारार्थ अस्पतालको आइसोलेशनमा रहेका छन् । साथै एक जनाको महिलाको मृत्यु भएको छ भने ११ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।
कोभिड–१९को आशङ्कामा पाटन अस्पतालमा जेठ १३ गते २९ जनालाई भर्ना गरी आइसोलेशन वार्डमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । कोभिड–१९ को पुष्टि भएका नौ जनालाई समेत आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने ८ जना निको भएर घर फर्किएको पाटन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णु शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा जेठ १३ गतेसम्म २ हजार २ सय ३६ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ भने २ हजार १ सय ७५ जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । ५४ जनाको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । जेठ १३ गते प्रदेशमा थप दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । यसका साथै गण्डकी प्रदेशमा कुल सात जना सङक्रमित भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । जेठ १३ गते सम्म ७ हजार ९ सय ५० जनाको र्‍यापीड डाइगनोष्टिक टेष्ट किटबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
जेठ १० गते भारतबाट आएर स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिकाको क्वारेण्टाइनमा बसेका २० र २९ वर्षीय दुई जना पुरुषमा जेठ १३ गते कोरोना भाइरस सङक्रमणका पुष्टि भएको छ । उनीहरुको जेठ ११ गते पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा पीसीआर प्रविधिबाट स्वाब परीक्षण गरिएको थियो । पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनीहरुलाई जिल्ला अस्पताल स्याङजाको आइसोलेशनमा सारिएको छ । सङक्रमितहरु भारतको सुनौली नाका हुँदै नेपाल आएका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय का अनुसार जेठ १३ गतेसम्म प्रदेश ५ मा १६ हजार ८ सय ८० जनाको आरडीटी विधिमार्फत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण गरिएको जनाएको छ । २३ हजार ५ सय ८९ जना क्वारेण्टाइनमा रहेका छन् । २ सय ६३ जना आइसोलेशनमा रहेका छन् । हालसम्म ३५ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । प्रदेश ५ मा जेठ १३ गतेसम्म
मुक्तकमैया र सुकुम्बासीले लकडाउनका बेला राहत स्वरुप खाद्यान्न नपाएको भन्दै जेठ १३ गते बारबर्दिया नपा–१ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । लकडाउनमा राहत स्वरुप खाद्यान्न नपाएको र कामका लागि खाद्यान्न भनेर तीन दिन मात्रै काम दिएपछि बारबर्दिया नपा–१ जमुनीका मुक्तकमैया र सुकुम्बासीहरुले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको मुक्तकमैयाका अगुवा बिन्तीराम थारुले बताउनु भयो ।
भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका वीरेन्द्रनगर, बबई र सुब्बाकुनामा रहेका क्वारेन्टाइनमा बसेका सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १० जना र सिम्ता गाउँपालिकाका दुई जना गरी १२ जनामा जेठ १३ गते कोरोना पुष्टि भएको छ । १२ जनाको उपचार कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेशनमा राखेर थालिएको छ । जसमा एक जना महिला र ११ जना पुरुष रहेका छन् । हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा दैलेख जिल्लाका आठ जना र सुर्खेत जिल्लाका १५ जना गरी २३ जना रहेका छन् ।
कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाका ३८ वर्षीय पुरुष र अछाम जिल्लाको मेल्लेख गाउँपालिकाकी ११ वर्षीया बालिका गरी सुदूरपश्चिममा थप दुई जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । योसँगै सुदूरपश्चिममा सङ्क्रमितको सङ्ख्या १७ पुगेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्कामा अछाम जिल्लाको मेल्लेख गाउँपालिका–४ कुष्कोटको एकै वडामा २० जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरी सुर्खेत पठाउने तयारी भइरहेको छ । २० जनामा सोही गाउँपालिकाका ३२ वर्षीय युवासँगै भारतबाट धनगढीसम्म आएका नौ जना र क्वारेण्टाइनमा रहेका ११ जना हुन् । दार्चुला जिल्लाका स्थानीय तहहरूले बनाएका क्वारेन्टाइनहरूमा भारत र काठमाडौँबाट उद्धार गरी ल्याएका नागरिकहरू राखिएको छ ।